Mayelana nathi - Amandla.mobi isiZulu
I-amandla.mobi yinhlangano ezimele futhi elwela amalungelo omphakathi ehlose ukuthuthukisa ubulungiswa kwimphakathi yaseMzansi. Ukuze senze lokhu, siguqula omakhalekhukhini sibenze babe ngamathuluzi okuqhuba intando yeningi, ukuze kuthi yinoma ikuphi lapho ohlala khona, noma ngabe yiluphi ulimi olukhulumayo, noma ngabe ikuphi okukhathalelayo; ukwazi ukubambisana nabanye ekuthatheni izinyathelo eziletha inguquko.
Amalunga ethu aye ahlangane ngezikhathi ezibucayi ekuthatheni izinyathelo ezinomgomo, ezixhumanisayo, nezinamacebo okuletha inguquko ephathekayo. Umsebenzi wethu kungukuxhumanisa wena kanye nabanye, ukuze ukwazi ukuba namandla okuphoqa osopolitiki kanye nezinkampani ukuthi baziphendulele mayelana nezenzo zabo. Ungaba ilunga le-amandla.mobi ngokubhalisa lapha noma ngokuthatha isinyathelo kweminye yemikhankaso yethu.
I-amandla.mobi yinhlangano engenzi nzuzo, ethembele ekuxhasweni ngamalunga ayo emikhankasweni yayo noma ngokunikela imali ngesonto, kanye neminikelo yabaxhasi. Njengenhlangano ezimele, asiyimukeli iminikelo evela emaqenjini ezepolitiki, evela kuhulumeni, kanye nasezinkampanini. Uma ufisa ukuxhasa i-amandla.mobi ngomnikelo bhalisa lapha.